देश Archives - Page 376 of 391 - चारदिशा
१५ मिनेटको श्रमले चन्द्रबहादुरले बनाए १२ वटा चौतारी
म्याग्दी, १० भदौ । जिल्लाको बेनी नगरपालिका–४ खबराका चन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिदिन १५ मिनेट श्रमदान गरेर विभिन्न स्थानमा १२ वटा चौतारी निर्माण गर्नुभएको छ । कार्कीले एक दिनमा १५ मिनेटका दरले श्रमदान गर्न थालेपछि गाउँको सरसफाइमा निकै सुधार हुनुका साथै गाउँलेमा पनि सामाजिक कार्यतर्फ रुचि बढ्न थालेको छ । विगत...
राजधानीमै महिना दिनमा २० वटा बलात्कार
काठमाडौँ, ९ भदौ । सञ्चारिका समूह नेपालले यस वर्षको साउन महिनाभित्र २० जना किशोरी तथा महिला बलात्कारको शिकार भएको जनाएको छ । सो संस्थाले विभिन्न १५ वटा राष्ट्रिय दैनिकको अध्ययन गर्दा एक महिनाको अवधिमा बलात्कारसम्बन्धी ८९ वटा समाचार सामग्री प्रकाशित भएको पाइएको छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसालाई...
तीन सय मजदुरलाई खाना खुवाउन सुरु
मोरङ, ८ भदौ । संयुक्त मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्दका कारण विराटनगर बसर्पाकमा अलपत्र परेका ३०० मजदुरलाई मजदुर सङ्घ–सङ्गठनले सोमबार साँझदेखि खाना खुवाउन सुरु गरेको छ । नेपालका विभिन्न ठाउँबाट गाडी लिएर आएपछि गन्तव्यतर्फ फर्कन नपाएर अलपत्र परेका यातायात मजदुरलाई पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्घ मोरङ र नेपाल...
दुई वटा प्रहरी बिट जलाइयो
गौशाला, ८ भदौ । प्रादेशिक सीमाङ्कनको विरोधमा विगत ११ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आज बिहान महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा दुई वटा प्रहरी बिट जलाएका छन् । दर्जनौंको सङ्ख्यामा रहेका मोर्चाका कार्यकर्ताले जलेश्वरको मटिहानी चोक र बखरी चोकमा रहेको प्रहरीका बिट जलाएका हुन् । आज बिहान ५...
बिपीको सालिक तोडफोड
रौतहट, ७ भदौ । गौर नगरपालिकास्थित बिपी चोकमा रहेको बिपी कोइरालाको सालिकमा आइतबार तोडफोड भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले बिपी कोइरालाका सालिकमा तोडफोड गरेका हुन् । मोर्चाद्वारा गरिएको लाठी प्रदर्शनसहितको जुलुसको क्रममा एक जत्थाले सालिक तोडफोड गरेका हुन् । जिल्ला अदालत चोकदेखि सुरु भएको लाठी जुलुस...
गोरखा दरबारको मर्मत सकियो
गोरखाबजार, ७ भदौ । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक गोरखा दरबारस्थित गोरखकाली मन्दिर भक्तजनका लागि आजदेखि खुल्ला गरिएको छ । रक्षाको अवस्था देखाउँदै यसअघि दरबार हेरचाह अड्डाले सूचना जारी गरेर भक्तजनलाई दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । भूकम्पले भत्काएको गोरखनाथ मन्दिर, कालिकाको मन्दिर, गोरखा दरबार, पर्खाल मर्मत...
द्वन्द्वपीडितकी आमा भीख माग्दै
गुलरिया (बर्दिया), ७ भदौ । द्वन्द्वमा मारिएका मगरागाडी गाविस– ४ मानपुर गाउँका वसन्त थारुकी आमा फक्किया थरुनीे भीख मागेर पेट पालिरहेकी छन् । थरुनी भन्नुहुन्छ ‘‘हालसम्म न त मेरो छोरोको लास भेटिएको छ, न त सास भेटिएको छ, मलाई पाल्ने छोरा बेपत्ता भएपछि अहिले ६० वर्षको उमेरमा मैले भीख...
डा. केसी आजबाट अनशन बस्ने
काठमाडौं, ७ भदौ । वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी आज (सोमबार) बाट आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै उनी अनशन बस्न लागेका हुन् । दिउँसो ४ बजेदेखि उनी अनशन बस्ने भएका हुन् । प्रतिवेदन...
विराटनगर, ७ भदौ । विराटनगर–१८ स्थित एमएम प्लास्टिक उद्योगको परिसरमा गएराति १०ः३० बजे अज्ञात समूहले सुतली बम विस्फोट गराएको छ । नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा चढेर आएका दुई जनाले उद्योगको पश्चिमपट्टिको गेटबाट सो बम फालेर फरार भएको सुरक्षागार्डलाई उद्धृत गर्दै पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरले जनाएको छ । यसअघि ती...
एक किलो सुनसहित १२ जना पक्राउ
काठमाडौं, भदौ ६ । भन्सार छली ल्याएको करिव ४६ लाख ३६ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको सुनसहित १२ जना पक्राउ परेका छन् । ११ वटा टुक्रा तथा ७ वटा चुरा गरी एक किलो ४८ ग्राम सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिएको प्रहरीले शनिबार राति १२ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।...